International Hotel Projects - Armati Hotel tetikasa Case Study1 - Sunrise Kempinski Hotel Beijing
Talata, Jolay 21, 2015 7: 43: 29 PM America / Los_Angeles
Ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny manomboka Armati 5 tetikasa any Beijing, Sina, Tonga soa eto amin'ny mitsidika ity trano fandraisam-bahiny mba hahita ny faucet.
Armati faucet catalouge azafady jereo izao manaraka izao:
Kempinski mandray anao Yanqi Lake, ny New Haven ny filaminana sy ny hatsaran-tarehy, miaraka amin'ny fomba fijery ny Yanshan mahafinaritra Mountain sy ny Mutianyu Great Wall, ora iray monja ny fiara avy any Beijing City Centre. Sunrise Kempinski manome vahiny sy ny fianakaviany ny zavatra mahafinaritra amin'ny vaovao tafiditra tanteraka-tsasatra eo amin'ny manodidina an'i Beijing. Trano dia ahitana 306 guestrooms sy Suites, fivoriana trano, Kempsinki The Spa, fialam-boly sy ny Fitness trano, ny Club zanak'osy sy ny fanatitra voaomana ny culinary amin'ny trano fisakafoanana ny sivy mihidy.
Novolavolain'ny Shanghai Huadu Architect Design Co., Sunrise Kempinski Hotel, Beijing maneho ny endriky ny fiposahan'ny masoandro sy ny manamarika firindrana, ny firaisan-tsaina sy ny Infinity. Zoro Avy amin'ny lafiny fomba fijery, ny trano fandraisam-bahiny dia miendrika trano toy ny scallop izay maneho 'Fortune' ao amin'ny kolontsaina Shinoa. Ny fomba fijery aloha dia hoe ny 'Rising Sun' - Famantarana ny fast- fampandrosoana toe-karena an'i Shina.
Luxury Hotel fiver nanomboka tetikasa fidiovana Kempinski